Heshiiskii Ankara oo baarlamanka ruxay -Xildhibaanadii DIR oo ka booday-Daarood oo hanjabay +Hawiye Saxaafadu Malahan Saaxiib Joogtaa Waagacusub Media 2013
Top:-Heshiiskii Ankara oo baarlamanka ruxay -Xildhibaanadii DIR oo ka booday-Daarood oo hanjabay +Hawiye 24 April 2013 Waagacusub.com-Xildhibaanada beesha Isaaq ee ku jira baarlamaanka Federalka Somalia ayaa ka biyo diiday mooshin ka dhana heshiiskii Maamulka Somaliland iyo Dowladda Federalka Somalia ku dhexmaray Magaalada Ankara ee Dalka Turkiga 13 April 2013 ... Xildhibaanada Isaaq ayaa ku guuleeystay inay kasbadaan Xildhibaanada beesha DIR oo dhan kadibna waxay Gudoomiyaha Baarlamaamka Mr Jawaari weydiisteen inuu baajiyo mooshinka looga sooo horjeeday heshiiskii Ankara.
Xildhibaano u dhashay Beelaha Daarood,Hawiye,Raxanweyn iyo beesha Shanaad ayaa ku hanjabay in Gudoomiye Jawaari xilkiisa waayi doono hadii uu maanta aqbalin in mooshinka qabsoomo.
Gudoomiye Jawaari oo xaqiiqsaday inay dhab noqon karta hanjabaada Xildhibaanada tirada badan ayaa maanta furay Kulanka Baarlamaanka lamana oga waxa ka soo bixi doona.
Xildhibaanada saxiixay Mooshinka looga soo horjeedo heshiiskii Ankara waxay dhan yihiin 32 Mudane hasse yeeshee kuwa taageersan waxay tiradoodu gaareeysaa 212 Xildhibaan.
Golaha Baarlamaanka Somalia ayaa maanta laga dareemayaa xiisad ka duwan sidii hore waxaana dhici karta in gacanta la isla galo.
Xildhibaanada Beelweynta Daarood waxay u muuqdaan inaysan u kala harin taageerida Mooshinka laakiin kuwa Hawiye waa ku kala qeybsan yihiin sida Digil iyo Mirifle u kala qeybsan yihiin.
Xildhibaanada beesha DIR waxay ka boodeen Mooshinka ,waxayna ka dhex arkaan Siyaasiyiin u dhashay beesha Daarood oo Prof Galeydh ka mid yahay.
Prof Galeydh maaha nin dhib yar oo la yareeysan karo,wuxuuna wax walba u maray wado sharciya,iyadoo taasi uu madax xanuun ka qaaday Gudoomiye Jawaari oo labadiisa ku xigeen ay taageersan yihiin in codka diidmada lagu fashiliyo heshiiskii ANKARA.
Xildhibaanada uu Prof Galeydh hor boodayo hadii ay ku guuleeystaan in heshiiskii ANKARA loogu codeeyo inuu yahay qiyaamo QARAN waxay si sahlan u dalban karaan mooshin xilka qaadis qiyaamo Qaran loogu magac daro kaas oo Madaxweyne Hassan Garguurte looga xayuubin karo xilka Madaxtooyadda.
Qodobka sharciyan looga guuleeysan karo xulufada Madaxweyne Garguurte wuxuu yahay heshiiska oo lagu qeexay inuu yahay mid dhexmaray laba DOWLADOOD.
Xildhibaanada Careeysan waxay qiyaano QARAN u arkaan in maqaam Dowladeed heshiis lagula saxiixdo Somaliland.
Wafdiga Somaliland waxay wateen sharciyaqaano Caalamiya halka Wafdiga Dowladda ahaayeen kuwa iska socday ,waana sababta wax walba looga saxiixay.
Si kastaba ha ahaatee, Go-aanka ugu dambeeya waxaa iska leh golaha Baarlamaanka Somalia ,waana arrin qasaba in cod loo qaado heshiiska.